Muvhuro 4 Chikunguru 2022
Architectonic Research Uye Kukura
Svondo 3 Chikunguru 2022
Architectonic Research Uye Kukura Iyo yekuvaka chirongwa cheTekinoro Center ine seyinotungamira kubatanidzwa kweiyo yekuvakisa ensemble munzvimbo yakatenderera, nzvimbo yakanyarara uye inofadza nzvimbo. Uku kutsanangudza Idea kunoita kuti ensemble ive yakavakirwa vanhu chiratidzo, yakanangidzirwa kune yakadzama yehungwaru kunyudzwa kwevaongorori vanozoita mairi, inoratidzwa mupurasitiki yavo uye inovaka chinangwa. Iko kurongedza uye kwakabatanidzwa dhizaini yedenga mune concave uye fomu convex ingango bata iyo yakakwenenzverwa yakatenderedzwa mitsara inotsanangura saka, hukuru hunhu hwezvakagadzirirwa kuvaka.
Mugovera 2 Chikunguru 2022
Chishanu 1 Chikunguru 2022
Pasuru Yetii Tea Hall Brand, kutora mufananidzo wekusvina uye kuparadzira tii wakasununguka uye wakasununguka, iyo pfungwa yekugadzira tii yekugadzira, yakasimba kana isina kusimba, ichishandura isingatarisiri, sechinhu cheti tii yekupenda uchirara tii. Kunakirwa kwekutora tii inki uye kushandisa chigunwe sepeni, kuchinjisa pfungwa yakawedzera yetiya horo yemhuri inova nemamiriro ekunze. Iko kwepakutanga kwepaketeni dhizaini inotapira inotapira, ichiratidza nguva inonakidza yekurarama hupenyu netiyi.
China 30 Chikumi 2022
Kusimudzira Project Yero ndeye yakazara art Project iyo inogadzira iyo inooneka pfungwa yeChinhu Chese Njanji. Zvinoenderana neyakaratidzwa chiratidzo chakakosha, kunze kukuru kuchaitwa mumaguta akasiyana siyana, uye huwandu hwetsika nemagariro zvinobva zvabikwa panguva imwe chete. SeIP inoonekwa, Project Yepanzvimbo ine mufananidzo unooneka uye inoshanda yemuvara kuti iite chiratidzo chakabatana, chinoita kuti vanhu vasakanganwe. Inokodzera hukuru hwakakura pamhepo pamhepo neinternet kusimudzira, uye kuburitsa kwezvinhu zvinoonekwa zvinoonekwa, ipurojekiti yekugadzira.
Visual Ip Design Project Yero ndeye yakazara art Project iyo inogadzira iyo inooneka pfungwa yeChinhu Chese Njanji. Zvinoenderana neyakaratidzwa chiratidzo chakakosha, kunze kukuru kuchaitwa mumaguta akasiyana siyana, uye huwandu hwetsika nemagariro zvinobva zvabikwa panguva imwe chete. SeIP inoonekwa, Project Yepanzvimbo ine mufananidzo unooneka uye inoshanda yemuvara kuti iite chiratidzo chakabatana, chinoita kuti vanhu vasakanganwe. Inokodzera hukuru hwakakura pamhepo pamhepo neinternet kusimudzira, uye kuburitsa kwezvinhu zvinoonekwa zvinoonekwa, ipurojekiti yekugadzira.
Mukurukuri Architectonic Research Uye Kukura Chigaro Pasuru Yetii Kusimudzira Visual Ip Design